Izindaba - Uyini umehluko phakathi kwe-globe valve ne-valve yesango?
Amagilavu ​​eglobe, ama-valve esango, amaveluvemvane, ama-valve wokuhlola namaphayiphu ebhola, njll. Lawa ma-valve manje asezingxenye zokulawula ezibalulekile ezinhlelweni ezahlukahlukene zamapayipi. Uhlobo ngalunye lwe-valve luhlukile ngokubukeka, ukwakheka kanye nenjongo yokusebenza. Kodwa-ke, i-valve yokumisa ne-valve yesango inokufana okuthile ngokubukeka, futhi womabili anomsebenzi wokusika epayipini. Ngakho-ke, abangane abaningi abajwayelene ne-valve bazodida ngabo. Eqinisweni, uma ubhekisisa kahle, umehluko phakathi kwe-valve yomhlaba ne-valve yesango mkhulu impela. Nanku umehluko phakathi kwe-valve yomhlaba kanye ne-valve yesango:
1. Isimiso esisebenzayo se-globe valve nesango valve sihlukile
Lapho i-valve yokuvala ivulwa futhi ivaliwe, isiqu se-valve siyakhuphuka. Jika isondo lesandla, bese isondo lesandla lizophenduka futhi liphakamise ngesiqu se-valve; ngenkathi i-valve yesango, lapho ijikelezisa isondo lesandla ukwenza isiqu sevalve sikhuphuke siye phansi, isondo lesandla ngeke lihambe.
I-valve yesango inezindawo ezimbili kuphela: ivule ngokuphelele noma ivalwe ngokuphelele. Ukushaywa kokuvulwa nokuvalwa kwesango kukhulu, futhi isikhathi sokuvula nokuvala yinde; ukunyakaza kwesigaxa se-stop valve kuncane kakhulu, futhi i-wedge ye-stop valve ingama endaweni ethile ngesikhathi sokunyakaza, ukuze isetshenziselwe ukulungisa ukugeleza, kuyilapho i-valve yesango ingasetshenziselwa ukusika kuphela -off futhi ayinayo eminye imisebenzi.
2. Umehluko wokusebenza phakathi kwe-globe valve ne-valve yesango
I-valve yokuvala ingasetshenziselwa ukulungiswa kokusika nokugeleza. Ukumelana oketshezi kwe-valve yembulunga kukhulu ngokwedlulele, futhi kunzima kakhulu ukuvula nokuvala, kepha ngoba ibanga eliphakathi kwesigaxa nendawo yokubekwa uphawu lifushane, ngakho-ke ukushaywa kokuvula nokuvala kufushane.
I-valve yesango ingavulwa ngokuphelele futhi ivalwe ngokuphelele. Uma ivulwe ngokuphelele, ukumelana kokugeleza okuphakathi esiteshini somzimba we-valve kucishe kube zero, ngakho-ke ukuvulwa nokuvalwa kwe-valve yesango kuzoba ukonga kakhulu abasebenzi, kepha i-wedge ikude kakhulu nendawo yokufaka uphawu ukuvulwa nokuvalwa isikhathi sinde.
3. Umehluko wokuqondiswa kokugeleza kokufakwa phakathi kwe-valve yomhlaba ne-valve yesango
Umphumela we-valve yesango kuzo zombili izinkomba uyefana. Asikho isidingo sezinkomba ze-inlet kanye ne-outlet zokufaka, futhi okumaphakathi kungagobhoza kuzo zombili izinkomba.
Kepha i-valve yembulunga idinga ukufakwa ngokuqinile ngokuya ngophawu lomcibisholo emzimbeni we-valve.
4. Umehluko wesakhiwo phakathi kwe-valve yomhlaba ne-valve yesango
Isakhiwo se-valve yesango sizoba nzima kakhulu kune-valve yomhlaba. Kusukela ekubukekeni, i-valve yesango yinde kune-globe valve kanti iglobe lembulunga lide kune-valve yesango elilinganayo. Ngaphezu kwalokho, i-valve yesango ine-design yesiqu esikhulayo nesiqu esingakhuphuki, kepha i-valve yembulunga ayinalo lolo mehluko.
I-Angle Globe Valve, Trunnion Ibhola Valve, I-Sluice Gate Valve, Engagqwali Isango Valve, I-Valve Yesango Lamanzi, Engagqwali Ball Valve,